विकिनी बडी बनाउन वर्षाको कसरत - विवेचना
विकिनी बडी बनाउन वर्षाको कसरत
December 16, 2018 249 Views
चलचित्र ‘भैरे’ मा समावेश ‘सान्नानीलाई’ बोलको गीतमा आफूलाई नियालेपछि नायिका वर्षा शिवाकोटीलाई पीर लाग्न थाल्यो । यो गीतमा उनी निकै मोटी देखिएकी छन् । उनले युट्युबमा आएका कमेन्टहरु पनि पढिन् । उनको मोटाइबारे थुप्रैले टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई लाग्यो, हैट अब त दुब्लाउनैपर्छ । वर्षा अहिले जिम धाउन थालेकी छन् । ललितपुरमा रहेको एउटा क्लबमा उनी दैनिक पुग्ने गर्छिन् । करिब दुई घन्टा स्यास्या गर्दै पसिना बगाउँछिन् ।
डेढ महिनादेखि जिम जान थालेकी हुन् उनी । ५५ केजी तौल भएपछि जिम जान थालेकी वर्षा अहिले ५ केजी घटिसकेको बताउँछिन् । तर, चलचित्रको छायांकनको समयमा खानेकुरा बढी खाने भएकाले फेरि मोटाइने चिन्ता उनलाई छ । उनको योजना ४५ केजी तौल बनाउनेछ । खासगरी उनलाई आफा पुक्क परेका गाला घटाउनुछ ।
दैनिक जिम गर्दा गाह्रो हुने उनले अनुभव सुनाइन् । उनले पर्सनल ट्रेनर नै राखेर जिम गरिरहेकी छन् । वर्षाको योजना विकिनी बडी बनाउने हो । उनले भनिन्, ‘मलाई ट्रेनरले कुन सेप बनाउने भनेर फोटो देखाउँदा मलाई विकिनी बडी भनेको थाहा भयो । यसैले, यही शैलीको सेप नै बनाउने तयारी गरेकी हुँ । विकिनी बडी बनाएर विकिनी नै लगाउने चाहिँ होइन ।’
वर्षाले आफूले खोजेजस्तो शरीर २ महिनामा बन्ने आशा लिएकी छन् । पछिल्लो समय सेतो कुरा केही पनि नखाएको वर्षाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मैले सेतो चिज खान नै छाडेँ । नुन, चिनी, चामल, मिठाइ पनि खादिनँ ।’
यो अभ्यास गर्न थालेपछि आफूले मिठाइ छाडेको उनले बताइन् । हप्तामा तीनपटक मिठाइ खाने गरेकी वर्षाले अहिले यो चटक्कै छाडेकी छन् । पर्दामा देखिने कलाकारका लागि फिटनेस औधि जरुरी छ । अझ नायिकाको हकमा त थोरै मोटी देखिँदा पनि दर्शकले टिप्पणी गर्ने, काम नपाइने पीर हुन्छ । अर्कोतिर लामो समयसम्म पनि फिट र जवान देखिनुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई छ ।
Previous ‘प्रसाद’ ले छाप्यो एक हप्तामा २ करोड
Next ‘सुश्री सम्पत्ति’ सहित हलमा तीन फिल्म
३० लाख रुपैयाँ नलिने मेयर सिवाकोटीको घोषणा
वन मन्त्रालयले पाँच करोड बिरुवा रोप्ने
असार १० भित्रै बजेट ल्याउन स्थानीय तहलाई निर्देशन
Pingback: in vitro and invivo
Pingback: philips bt64 bluetooth speaker
Pingback: lifestyle homme
Pingback: Extreme Vehicle Creation
Pingback: asphalt9soundtrack
Pingback: ursprüngliche Website
Pingback: run 4
पत्रकार भट्टराईकाे अश्वत्थामा विमाेचित
हत्या गरेर भीरबाट फ्याँकियो युवतीको शव
August 16, 2017 193,262
August 19, 2017 21,896
विवेचनाको रजतउत्सवमा ‘विवेचना शिक्षा कोष’ स्थापना र झापा मिडिया कप गरिने
August 16, 2017 19,380
March 28, 2018 16,769
March 30, 2018 15,685
Best Women Perfumes In India: ... [Trackback] [...] Info on that Topic: bibechana.com/2017/10/13/iran/ [...]...
נערת ליווי: "We've got to build to an alternative crescendo, cheri," he said. "Therefore we...
Realtor Waycross Ga/ Real estate Agents Waycross Ga: ... [Trackback] [...] There you can find 38244 more Information on that Topic: b...
خرید vpn: vpn ایفون the time to examine or consideraappear...
خرید vpn: vpn ایفون I was curious if you ever imagined of ch...
केकी र प्रेम चाउचाउको स्वाद चाख्दै - विवेचना https://t.co/AIZiTqiSLZकेकी-र-प्रेम-चाउचाउको-स्व/2019/05/01
जापानमा सम्राटद्वारा राजगद्दी परित्याग ! नारुहितो नयाँ राजा - विवेचना https://t.co/AIZiTqiSLZजापानमा-सम्राटद्वारा-राज/2019/05/01